म एक राम्रो काम छोड्दै छु र सोशल मीडियाको लागि हेडिing | Martech Zone
शनिबार, अक्टोबर 4, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पछिल्लो वर्ष जुन मैले बिताएको छु संरक्षक एक अविश्वसनीय रोलर कोस्टर सवारी भएको छ। कम्पनी एक जबरदस्त वृद्धि sprit मा छ र अत्यन्तै सफल!
हामीले जित््यौं टेकपॉइन्ट मीरा पुरस्कार.
हामीले of को विकास पूरा गर्यौं POS एकीकरणहरू - माइक्रो, POSitouch, Comtrex र Aloha।
हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि अधिकतम रूपान्तरण गर्न प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस पुन: विकसित गर्नुभयो। हामीले अनुप्रयोगमा रिडन्डन्सी र सुरक्षा सुविधाहरू थप्यौं।
हामीले हाम्रो मल्टि-युनिट चेनहरूको लागि रेस्टुरेन्ट स्थान साइटमा पनि फ्याक्यौं।
शुक्रवार मेरो अन्तिम दिन थियो संरक्षक। त्यस्तो कम्पनी छाड्न गाह्रो थियो जुन मैले मेरो मुटु र प्राणमा खन्याईदिएँ र त्यसमा सबैभन्दा धेरैको वित्तीय समर्थन छ सफल इन्टरनेट कम्पनीहरु in इन्डियानापोलिस
मलाई कुनै श doubt्का छैन कि मैले कम्पनीलाई ठूलो आकारमा छोडिदियो। मेरो मात्र चिन्ता भनेको यो हो कि लगानीकर्ताहरू यस चालसँगै ठीकठाक छन्। म पाट्रोनपथमा जानुको मुख्य कारण भनेको उनीहरूको लगानी टोलीलाई चिन्नु थियो जुन यस क्षेत्रका केही उत्कृष्ट इन्टरनेट उद्यमीहरूको मिलेर बनेको थियो। मैले गर्न चाहेको अन्तिम कुरा यति सफलता पछि उनीहरूलाई छोड्नु थियो। म संरक्षकलाई सल्लाह र सहयोग गर्न जारी राख्छु जब उनीहरूलाई आवश्यक पर्दछ, मेरो प्रस्थानले उनीहरूको सफलतालाई असर गर्दैन भनेर निश्चित गर्न।
बृद्धि र नतिजा निश्चित रूपमा संरक्षकमा हाइलाइटहरू थिए। मसँग केही अविश्वसनीय मानिसहरूसँग काम गर्ने मौका थियो। हामीले थोरै संसाधनहरू सहित गत बर्षमा केही चमत्कारहरू कार्य गर्यौं। म के हासिल गरी सकेकोमा म गर्व छु।
वर्ल्ड क्लास मानिससँग काम गर्दै
पछिल्ला months महिना वा सो भन्दा बढि, मलाई मार्टी बर्डसँग काम गर्न मनपर्‍यो - त्यस्तो व्यक्ति जसलाई म शुरुदेखि नै चिन्थें सटीक लक्ष्य तर कहिले सीधा साथ काम गर्ने मौका थिएन। मार्टी एक अविश्वसनीय मार्केटर हो जसले स्क्र्याचबाट विश्व-स्तरीय मार्केटिंग प्रोग्रामहरू निर्माणको लागि एक नक लगाएको छ।
मार्टी प्याट्रोनपाथमा भर्खरै आउँदै गरेको राष्ट्रिय ईमेल प्रोग्राम लाई ग्रहण गर्न गएको हो जुन हामीले भर्खर एक करोडौं डलर कर्पोरेशनको लागि हस्ताक्षर गर्यौं। २ दिनमा, उनले परियोजना ग्रहण गरे। केही हप्तामा, उनले परियोजनाको वरिपरि एक कार्यक्रम र प्रक्रिया बनाए। अब उनको नेतृत्वमा कार्यक्रम बढ्दै र फस्टाइरहेको छ। कस्तो महान मान्छे! थोरै ज्ञात तथ्य, मार्टी एक को साथ एक मास्टर म्याकेनिक पनि छ अडी टीटीको लागि उत्कटता.
टीमको बाँकी महान पनि थिए। मार्क ग्यालो र चाड ह्यान्किन्सन दुबै पेशेवर र व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न उत्कृष्ट थिए। ती दुबै महान इसाईहरू हुन् जसले मलाई चुनौतिहरूको बीचमा सल्लाह दिन मद्दत गर्दछ। म दुबै indeणी छु। उनीहरूसँग खाता व्यवस्थापन टोली पनि हुन्छ जुन आफ्ना ग्राहकहरूलाई सफल हुन मद्दतको लागि समर्पित कडा लडाकुहरू हुन्। म धेरै जसो वर्षको लागि टेमी हेथसँग काम गर्न थालें र उनी अचम्मै थिई, दर्जनौं ग्राहकहरू हरेक घण्टा हिर्काउँछिन् र अझै उत्पादन गर्न सक्षम भएकी थिएँ।
कठिन पक्ष मा यस वर्ष काम को मांग थियो र कसरी यो मेरो पूरा ध्यान आकर्षित। यस ब्लगले कष्ट भोगायो जस्तो गरी मैले मेरो केहि प्रदान गर्न सक्षम भयो पीईटी परियोजनाहरू। कलमा हुँदा मलाई क्षेत्रीय नेटवर्कि events घटनाहरूबाट पनि टाढा बनायो। दुर्लभ समयहरू जुन मैले देखाए, मान्छेहरू आघातमा थिए!
इन्डीको उत्तरी तर्फबाट आएको ड्राईभ मैले सुरुमा हेरचाह गरेको थिएँ, तर ग्यासको मूल्य आभास भएको छ र मेरी छोरीले मलाई अझ घर चाहिएको छ, दिनको दुई घण्टा सडकमा साँच्चै चोट लाग्यो। म को लागी आभारी छु मेरो छोरा - मा एक पूरा लोड juggling जबकि IUPUI साथ साथै निजी पढाइ र मठ सहायता केन्द्रमा, उसले अझै केटीलाई घटनाहरूमा लगत्तै लैजान र उनलाई खुवाउन समय पायो। म मेरो अविश्वसनीय बच्चाहरूको लागि आभारी छु!
कम्पेन्डियम ब्लगवेयरमा हेडिंग
त्यसोभए ... जब क्रिस बग्गट बोलाए कम्पेन्डियम ब्लगवेयर र भने कि त्यहाँ तिनीहरूसँग काम गर्ने अवसर हुन सक्छ, म एक्स्ट्याटिक थिएँ! कम्पेन्डियम सुरु क्रिस र म २०० 2006 मा साताको अन्तमा काम गर्दैथ्यौं।
म एक्स्ट्याक्टरेटसँग रहें र अली बिक्री बोर्डमा आए। क्रिसको जोशिलोको साथ अलीको नेतृत्वले कम्पनीलाई अविश्वसनीयमा आकाश छोडिदियो कर्पोरेट ब्लगिंग प्लेटफर्म। गत बर्षमा मैले कम्पनीसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गरेको छु र प्लेटफर्मको ईभान्जलाइज गरेको छु। हामीले भर्खरै एक महीना अघि कानून फर्म बोस म्याकिन्नीमा ल्याएका थियौं र उनीहरूले पहिले नै भनिरहेका छन कि उनीहरूले राम्रो खोज इञ्जिन लिडलाई रिपोर्ट गरिरहेका छन्!
सोमबार, म यसको रूपमा कर्तव्यहरू लिन्छु ब्लगिंग ईभान्जलिज्मका उपाध्यक्ष कम्पेन्डियममा। म अलीलाई रिपोर्ट गर्दैछु र हाम्रा सबै टोलीहरू र ग्राहकहरूलाई शिक्षा, प्रचार, स्वचालित, एकीकृत आदि गर्न मद्दत गर्ने छु मार्केटिंग प्रयासहरू। पछिल्लो केही बर्षमा मेरो कामलाई नकार्न गाह्रो स्थिति हो। म फेरि इन्डीमा सर्कलमा पनि काम गर्दैछु, त्यसैले म निश्चित छु कि म धेरै पुराना साथीहरूसँग भाग लिनेछु!
यो सोच्नका लागि सबै प्याट कोयल र म पढ्दै नग्न कुराकानीहरू केही वर्ष पहिले धेरै अचम्मको छ।
कि संग, म एक धन्यवाद owणी छ रबर्ट स्कबल र शेल इजरायल एउटा पुस्तक लेख्न को लागी जसले मलाई मेरो आफ्नै ब्लग सुरु गर्न प्रेरित गर्‍यो र दिशा परिवर्तन गर्‍यो जुन मार्केटिंग संसारमा लिन चाहान्छु! देशको इतिहासको सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक मन्दीको क्रममा म सोशल मिडियामा स्थिति ग्रहण गर्दैछु कि यस माध्यमको शक्तिलाई आवाज दिन्छ, होइन र?
बधाई छ डग! नयाँ कामको बारेमा सबै सुन्नको लागि तत्पर!
पोखरी पारबाट उत्तम,
यो गजबको खबर छ श्रीमान VP, महोदय!
तपाई र तपाईको परिवारलाई ईश्वरीयता।
यो भन्दा राम्रो मान्छे संग हुन सक्दैन!
राम्रो समाचार, डग! तपाईको निर्णयको पछाडि विवरण र ईतिहास पढ्दा यो राम्रो लाग्यो।
बधाई छ डग। साँच्चै राम्रो समाचार र तपाईंको कथा साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
सामाजिक सञ्जालमा स्वागत छ! यार, म पनि यो माया गर्छु !! म यो चीज खान्छु, सास लिन्छु र सुत्छु !! तपाईलाई धेरै राम्रो !!
हामीलाई आफ्नो सफलता मा पोस्ट राख्नुहोस्! तपाईंले पहिले नै यस्तो अचम्मको कम्पनीमा के ल्याउनुहुनेछ भनेर हेर्न म उत्साहित छु!
डग - वाह! दयालु शब्दहरूको लागि धन्यवाद। तपाइँको प्रतिभा, जोश र उत्साहले तपाइँलाई कम्पेन्डियममा राम्रोसँग सेवा गर्नेछ - बधाई छ। Patronpath मा तपाईंको महत्त्वपूर्ण योगदानले एउटा आधार सिर्जना गर्‍यो जसलाई हामी निर्माण गर्न जारी राख्नेछौं। म अफिसमा तपाईंको उपस्थिति, तपाईंको विनम्र आचरण, संगीतमा तपाईंको पागल स्वाद (!) र रमाइलो हाँसोलाई मिस गर्नेछु। तपाईलाई Twitter मा पछ्याउँदा हामीले गरेका ती उत्कृष्ट लन्च घण्टा कुराकानीहरू प्रतिस्थापन गर्दैन! ख्याल राख्नुहोस् डग।
अक्टोबर 5, 2008 बिहान 1:07 बजे
वाह!! त्यो गजब छ! मलाई थाहा छ तपाईं राम्रो गर्नुहुनेछ - यो तपाईंको जुनून हो!
अक्टोबर 5, 2008 बिहान 7:26 बजे
राम्रो सम्झौता डग!
मलाई याद छ कि तपाईंले मलाई कम्पेन्डियममा आफ्नो संलग्नता उल्लेख गर्नुभएको थियो र मैले सोचे कि यो तपाईंको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म हुनेछ!
यो अन्ततः साकार हुँदैछ सुन्दा राम्रो छ!
अक्टोबर 5, 2008 बिहान 9:58 बजे
तपाईंका लागि उत्तम फिट जस्तो लाग्छ। मैले यो ब्लगमा तपाइँको खाली समयमा गरेको कामको आनन्द उठाएको छु। यो कस्तो छ भनेर हेर्न रमाईलो हुनेछ जब यो तपाइँको सबै ध्यान छ।
बधाई छ डग!
तपाइँ Compendium मा राम्रो गर्न जाँदै हुनुहुन्छ!
अक्टोबर 6, 2008 बिहान 12:28 बजे
तपाईलाई शुभकामना, डग। म पक्का छु कि तपाईंले नयाँ गिगको साथ राम्रो गर्नुहुनेछ र मलाई नयाँ शीर्षक मनपर्छ! (यसले तपाईंले पहिले नै गरिरहनुभएको कुराहरू कब्जा गर्दछ।)
अक्टोबर 6, 2008 बिहान 5:08 बजे
राम्रो भयो, डग!
बधाई छ डग, भर्खरै आज समाचार हेर्नुभयो! तपाइँको नयाँ भूमिकामा शुभकामना, तपाइँ र कम्पेन्डियम जस्तै आवाज एकदम उपयुक्त छ।
मई 30, 2011 मा 8: 15 एएम
वाह !! त्यो अद्भुत छ! तपाइँ कम्पेन्डियममा महान कार्य गर्न लाग्नुभएको छ!